Janoary 28, 2021
Maty ve ianao amin'ny fahanterana? Eny, ny zava-mahadomelina manohitra ny fahanterana dia tsy isalasalana fa ny safidy azo itokisana amin'ny famerenana ny famantaranandro biolojika. Jereo ny lafiny manan-danja amin'ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN), ny anjara asany amin'ny fahamboniana, ary ny fomba handraisana ny fitsaboana.
Phcoker dia mpanamboatra matihanina hamokatra vovo-tany Nicotinamide mononucleotide (NMN)
Mandefasa fanadihadiana haingana: Contact us
Ny fitomboan'ny taonjato dia tsy azo ihodivirana. Na izany aza, misy ny fahafaha midona amin'ny famerenana ny dingana efa antitra Nicotinamide Mononucleotide. Mitazona ny soavalinao satria hanome anao fanazavana feno momba ny fomba mahagaga izay ampiasain'ny sela ao anatin'ny sela olombelona.
Ny volo mainty dia mitovy amin'ny fahendrena!
Izany finoana izany no angamba ny zavatra tsara indrindra izay hiresahanao lehibe. Na izany aza, ny tsikinao dia ho ela velona rehefa manomboka mahatsikaritra ny hatezerana manerana ny hoditrao ianao. Ankoatra izany, ny fahanterana dia misy fiantraikany eo amin'ny asany ara-batana sy ara-tsaina.
Andao hatrehana izany. The anti-fahanterana ny menaka tarehy sy ny fandidiana kosmetika no tena niavaka tamin'ity taonjato marani-tsaina ity. Ny tokony ho fantatrao dia ireo fotoana fohy ireo ary mety hitera-doza.
Raha ny marina, tokony hiady amin'ny fahanterana ianao amin'ny fahatakarana voalohany ny fizotry ny sela sy ara-physiolojika izay mandray anjara amin'ny fepetra mifandraika amin'ny taona. Aorian'izany dia lasa mora ny manely ny rafitry ny ady amin'ny fahantrana. Ny Mononucleotide Nicotinamide anti-aging miasa mba hamerenana ny fahatanorana.
Te-hizara taona amim-pahasoavana isika rehetra, sa tsy izany? Eny, mety hitranga tsy misy dikany io zava-misy io raha mbola miha-malemy ny vatanao, ary farany ianao dia maka ho an'ny aretina isan-karazany, ny Alzheimer, ny fahatsiarovan-tena ary ny maro kokoa.
Mononucleotide miafina (Nicotinamide) miafina (NMN)
Noho izany, inona no zava-miseho rehetra momba ny Mononucleotide Nicotinamide? Avelao aho hanazava.
Ny NMN dia misy amin'ny endrika alpha (α) sy beta (β). Na izany aza, ny β-NMN no endrika mavitrika indrindra. Ity nucleotide bioaktifika ity dia ivon'ny biosynthesis ny adenine dinucleotide nicotinamide na ny NAD +.
Ity voankazo ity dia mitovitovy amin'ny avocadoes, voatabiha, kôkômba, kohaka, broccoli ary ronono maina. Ao amin'ny laboratoara, izy io dia azo raisina ho toy ny nokotinamide mononucleotide bulk vovoka.
Amin'ny endriny manilika dia mamaritra ny laharana CAS izy io, 1094-61-7. Ny fitambarana dia nanjary avy amin'ny fihetsika teo amin'ny nukleosida, toy ny nikotinamide riboside sy ny vondrona phosphate.
Amin'ny fandalinana mialoha, ny fiasan'ny Nicotinamide Mononucleotide amin'ny totozy dia voaporofo fa mahomby amin'ny hetsika biokimika sela, fitantanana ny aretin'i Alzheimer, diabeta mifandraika amin'ny taona, fahasarotana vokatry ny hatavezina, ary ny aretin-tsaina. Na eo aza ireo hetsika ara-panafody rehetra mifandraika amin'ny Nicotinamide Mononucleotide, ny zava-bita voalohany indrindra dia ny fandraisany anjara amin'ireo hetsika fanoherana ny fahanterana.
Ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ny NMN no loharanon-kery lehibe indrindra ao anaty sela. Rehefa mihantitra ianao, dia mihena ny angovo azo avy amin'ny sela noho ny tsy fahampian'ny mononucleotide nicotinamide sy ny fihenan'ny NAD +. Ny fitantanana ny NMN dia hamadika ny dingana ary hanonitra ny tsy fahampiana.
(1) Ahoana no fahagagan'ny NMN?
Ireo fanafody manohitra fahanterana ireo dia mandeha toy ny tselatra avy ao amin'ny tsinainy mankamin'ny lalan-drà. Afaka roa minitra dia hoentina any amin'ny lalan-dra izy ireo. Noho io antony io dia miharihary fa mety tsy hisy ny fanehoan-kevitra biokimika ao amin'ny lalan'ny molekiola.
Ny hafainganam-pandeha mahavariana dia nahatonga ny mpikaroka hamintina ny mety hisian'ny transporter, izay manamora ny fandefasana solika sela. Ohatra, Imai sy ireo mpiara-miasa aminy dia nikasa hitady valiny tamin'ny alàlan'ny fandalinana natao farany izay navoaka tamin'ny 7 Janoary 2019.
Miaraka amin'ny fahanterana dia mampiasa NAD + betsaka kokoa noho ny vitany ny vatana. Na eo aza ny fomba ampiasanao ny mononucleotide nicotinamide, dia ho fandaniam-potoana foana ny fizotrany raha mbola tsy misy molekiola manampy ny fitaterana azy. Tohizo ny horonan-taratasy mba hamongorana ilay mpitatitra hafahafa izay hamaha ny 90% amin'ireo fahasarotana efa mihantitra.
(2) Ny endrika nokotinamide mononucleotide
(3) Nikotinamide Mononucleotide Specifications
Product anarana Rano nokotinamide mononucleotide (NMN) poids
CAS no. 1094-61-7
Molecular weight 334.221 g / mol
Bika Aman 'endrika Fotsy fotsy fotsy
fahadiovana > 98%
Storage mari-pana -20 ° C
Other anarana · Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5'-phosphate
· Mononucleotide nic-nicotinamide
· Nikotinamid ribonucleotide
· Nikotinamide ribonucleoside 5'-phosphate
Ny nicotinamide mononucleotide sy ny NAD +
samy Ny nicotinamide mononucleotide sy ny NAD + dia mpamorona biomarker manan-danja amin'ny famatsiana solika.
Ny NMN dia ivotoerana amin'ny biosynthesis ny adinine dinucleotide Nicotinamide (NAD +). Ny tsiranoka dia toy ny substrate ho an'ny enzymes manokana toy ny nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, izay mivadika ho NAD + ao amin'ny vatan'olombelona. Eo am-pandrenesana, miova ho amin'ny nikotinamida io fitambarana io. Taorian 'izany, dia mitarika fanehoan-kevitra hafa an-tsokosoko izy io mikasika ny nikôtinina ny phosphoribosyltransferase (NAMPT) izay mamorona ny NMN.
Ireo molekiola roa ireo dia mifandraika amin'izany fa ny tsy fisian'ny iray amin'izy ireo dia hisy fiantraikany amin'ny iray hafa. Raiso, ohatra, rehefa latsaka ambany dia ambany ny habetsahan'ny NMN, angamba noho ny senescence, ny habetsaky ny NAD + dia hidina tsikelikely.
Rehefa mihantitra ianao, dia mihena ny fatran-tsakafo sasany ny NAD + mihoatra noho ny vatana mety mamoaka solika. Ny sirtuins, ny NADase, ary poly-ADP-ribose polymerase (PARP) dia ampahany amin'ny enzymes, izay mandoro ny NAD + mitarika mankany amin'ny fitetezany.
Na izany aza, ny fihenan'ny solika cellules dia tsy mahasamihafa. Raiso, ohatra, ny fihetseham-pon'ny enzymatika mifandraika amin'ny fanafody PARP amin'ny fanamboarana ADN voaaro. Ny sirtuins ihany koa dia manana andraikitra manan-danja amin'ny fanatsarana ny fikorontanan'ny sela.
Na dia misy fifandraisana ara-panafody amin'ireo biomarker roa ireo aza dia tsy afaka mitantana ny NAD + mivantana mihitsy ao anaty rafitra ianao. Raha betsaka araka izay azo atao ny fomba, dia tsy ho zakaina ny vokany. Ohatra, ny fatra be dia be mampiavaka ny havizanana, tebiteby ary tsy fahitan-tory. Ankoatr'izay, ny fitambarana dia tsy azo ovaina amin'ny alàlan'ny membrane plasma.
(1) Fomba fanamafisana
The anti-aging Nicotinamide Mononucleotide dia azo ampiasaina ho zava-mahadomelina. Ny fahatongavany amin'ny rindrin'ny tosi-tsakafo sy ny rafi-pitatitra dia manomboka amin'ny telo minitra eo ho eo. Amin'ny 15th min, efa nakarina daholo izy rehetra. Ny fanadihadiana feno nataon'i Imai sy ireo mpiara-manadihady aminy dia manamarina fa misy proteinina iray izay manafaingana ity taham-pifandraisana haingana ity.
Rehefa tafiditra ao amin'ny vatan'ny olona ny NMN, dia mivadika mora foana ho an'ny NAD + ny fitehirizana azy. Ny dingana metabolism dia afaka mandray hatramin'ny antsasak'adiny. Ny fihenan'ny NAD + dia mihatra amin'ny hozakelin'ny skeleta, fotsy hoditra fotsy, ny atiny ary ny cortex. Na izany aza, ny fitantanana maharitra ny Nicotinamide Mononucleotide dia nampiakatra ny haavon'ny NAD + amin'ny taova hafa toy ny vatosoa matevina.
Ao anatin'ny sela mammalsiana, misy telo metabolika samihafa manonitra ny tsy fahampian'ny NAD +.
① Ny lalan'i De Novo
Ny teny hoe La Novo dia teny tsy misy dikany, midika hoe "hatrany am-piandohana". Ny nucleotides dia avy amin'ny asidra tryptophan na nicotinic, izay avy amin'ny karazan-tsakafo NMN.
Ao anatin'ity lalana ity, ny fizotry ny asan'ny bio-chemika dia mitarika amin'ny famolavolana ny mononucleotide asid nikotinika, ny adinine dinucleotide nicotinic, ary farany ny NAD + tena nandrasana. De Novo dia mamokatra momba ny 15% amin'ny solika.
② Ny lalana mahavonjy
Eto ny lalana dia mamerovero ny nucleosides amin'ny tranga izay ialana amin'ny ADN. Izy io dia mitongilana mihoatra ny 80% amin'ny totalin'ny NAD +, izay ilain'ny vatan'olombelona amin'ny asany. Ny lalana dia mamindra ny asidika nikôtinina sy ny nikotinamide mba hamafisina ny NAD + vaovao.
Ny phosphoribosyltransferase nicotinate dia manamora ny famolavolana ny mononucleotide asid nikotinina amin'ny asidika nikotinina. Avy eo, ny nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1 dia manasitrana ny adenivaly ny vokatra vokatra entina amin'ny adinine mononucleotide asidônika, ary farany amin'ny NAD +.
Miankina amin'io lalana io ny asan'ny NMN amin'ny olombelona.
Nikotinamide Riboside dia avela hafa NAD +. Raha ny phosphorylation eo anatrehan'ny kino kinase nicotinamide, ny biomarker dia manome ny NMN alohan'ny fanodinana enzymatika iray hafa mankany NAD +.
Ny tantaran'ny NAD + sy ny NMN amin'ny fikarohana
Nandritra ny taona maro, ny fianarana sy ny fampiasana therapeutic ny adinine dinucleotide nicotinamide sy ny voron-dry zareo dia ny hatezerana. Na izany aza, tokony marihinao fa ireo fananganana anti-aging dia nokarohina tamin'ny fikarohana hatramin'ny tapaky ny 1900.
Tao amin'ny 1906, nanamafy ny manam-pahaizana voalohany fa ny NAD + dia nampitombo ny tahan'ny fery amin'ny levia. Taorian'izay dia nisy biochemista hafa narahina nanaraka azy tamin'ny nizarana azy io ho toy ny nucleotide.
Tamin'ny alalan'ny fikarohana nataony tao amin'ny 1937, nahitan'i Conrad Elvehjem fa ny vitamine sy ny nicotinamic nicotinamide ary ny nikotinika dia ny vitaminina NAD +. Taty aoriana dia hitany fa afaka manamaivana pellagra amin'ny alika ireo roa ireo. Ny antony dia ny haavon'ny asidika nicotinic sy ny nikotinamide dia ambany noho ny olona voan'ny aretina.
Tamin'ny 1963, nametraka ekipa mpahay siansa fa ny fiasan'ny Nicotinamide Mononucleotide amin'ny totozy dia handrisika ny anzima miankina amin'ny ADN, izay manan-danja amin'ny fampiroboroboana ny asan'ny sela. Roa taona taty aoriana, mpikaroka sasany dia nitondra ny lalan'ny biokimika NAD + misy ny tryptophan sy ny asidra nikotinika.
Nanomboka teo, ireo biochemista dia nanohy naneho fahalianana amin'ny fikarohana NMN sy NAD +. Amin'ity vanim-potoana ity, ny lanjany tena dia ny dikan'izany fanafody manohitra ny fahanterana amin'ny faharetana sy ny famerana ny fahasarotana mifandraika amin'ny taona.
Ny fikarohana farany momba ny mononucleotide nicotinamide dia miasa amin'ny totozy
Misy fianarana maro tsy miankina amin'ny murine modely izay ahazoana tombontsoa ara-pahasalamana ao amin'ny Mononucleotide Nicotinamide (1094-61-7).
Ndeha hifantoka amin'ny olom-bitsy, izay nisy fiantraikany tamin'ny biochemistry.
(1) Araka an'i Sinclair, ny NAD + dia Loharanon'ny fahatanorana
Dr. Sinclair sy ireo mpiara-miasa aminy dia namoaka fikarohana maromaro mikasika ny mety ho an'ny nicotinamide mononucleotide sy ny NAD + amin'ny famerenana ny fahanterana. Araka ny fandinihany 2013, Sinclair sy ny ekipa dia nahatsikaritra fa ny tazo taloha 22-volana nalain'ny NMN nandritra ny enina andro dia nanatsara ny fahaiza-manao, ny metabolismy, ary ny fiaretana.
Taoriana kely tao amin'ny taratasy fikarohana 2016 dia nanamafy ilay vondrona fa nahazo tombony mitovy amin'ny fampiharana ny NMN. Raha tokony ho avy amin'ny hazakazaka isan'andro ianao, dia mbola afaka mahatsapa ny vokatra mitovy ihany koa ianao rehefa mampiasa ny fanafody nokotinamide mononucleotide ianao.
Araka ny hevitr'i Harvard Geneticist, ny NMN miasa amin'ny olombelona dia mihodina manodidina ny fampidiran-dra amin'ny alàlan'ny atleta antitra sy elatra.
(2) Mills dia manizingizina fa ny NMN dia manamaivana ny fihenan'ny fombam-pahaizana amin'ny taha-maotina
Raha mikasika ny fianarana 2016, Mills et al. dia hita fa ny fihanaky ny NMN dia mety hanohitra ny fihenan'ny asa ara-batana sy ara-immunolojika amin'ny totoana taloha. Amin'ny fiafaran'ity fanampiny NMN ity fikarohana, ny mpikiky dia nanoratra fitomboan'ny fanehoan-kevitry ny sela fiarovan'ny vatana, ny fitomboan'ny lymphocytic, ary ny fihenan'ny neutrofil.
Talohan'izay, tamin'ny 2011, Mills, Yoshino, ary Imai dia nampiasa modely totozy hanamafisana ny anjara asan'ny NAD + amin'ny fitsaboana diabeta vokatry ny sakafo sy ny taona. Tamin'ny fandinihana iray hafa tamin'ny taona 2016, dia niara-niasa tamin'ny mpikaroka hafa izy izay nanamafy fa ny fanampiana NMN dia hanoherana ny adin-tsaina sy ny fihenan'ny lalan-dra amin'ny totozy efa antitra.
(3) NMN Miady Amin'ny Aretin'ny Alzheimer (AD) ao amin'ny Murine Models
Tamin'ny 2015, Long et al. nanadihady ny vokatry ny NMN amin'ny tsy fahampian'ny taovam-pisefoana mitochondrial amin'ny totozy voan'ny aretin'i Alzheimer. Ny ekipa dia nanamarika fa ny fitsaboana NMN dia afaka nitsabo ny etiology an'ny AD, anisan'izany ny ambany OCR (tahan'ny fanjifana oxygen), ny fallode NAD +, ary ny mitochondria tsy ara-dalàna.
Tamin'ny 2016, Wang sy ny namany dia namoaka ny fikarohana, ary namintina fa ireo anti-fahanterana ny zava-mahadomelina dia miady amin'ny fahasimban'ny kognita sy ny neural, vokatry ny oligomer β-amyloid (Aβ). Ity proteinina Aβ ity dia neurotoxic ary tompon'andraikitra amin'ny famolavolana takelaka ao amin'ny atidohan'ny marary AD. Wang et al. nanatsoaka hevitra fa ny fitantanana NMN amin'ny totozy dia nitarika ny fihenan'ny oligomer Aβ, izay nanamafisana ny fiasan'ny kognita.
Taorian'ny fandalinana tamin'ny taona 2017 dia hitan'i Hou sy ireo mpiara-miasa aminy fa ny fanampiana NAD + dia nampihena ny famokarana oligomera β-amyloid. Herintaona taty aoriana, nametraka i Yao sy ny ekipany fa ny Nicotinamide Mononucleotide dia mampihena ny fanangonana ny A sy ny fatiantoka synaptic amin'ny maodely murine AD-Tg.
(4) NMN sy Cardio fiarovana
Araka ny fanontana 2014 nataon'i Yamamoto sy ireo mpiara-miasa aminy, NMN miaro ny fo amin'ny ratra ischemika sy ny fampidiran-dra. Talohan'ity fandalinana ity dia anisan'ny ekipa iray tamin'ny taona 2012 i Yamamoto, izay nahitana fa ny NAD + dia miady amin'ny hatavezina ateraky ny totozy.
Tamin'ny 2016, De Picciotto et al. ary ireo biôkimista namany dia nandinika ny vokatry ny famenon'ny NMN amin'ny fiasan'ny totozy efa antitra. Avy amin'ny fintinina, ny mononucleotide nikotinamide dia voaporofo fa mahomby amin'ny famadihana ny tsy fetezan'ny lalan-dra, ny adin-tsaina ary ny fihenan'ny elastin.
(5) Ny Fihaonana amin'ny lalana vaovao amin'ny famindrana solika avy amin'ny finday avy amin'i Shin-Ichiro Imai
Tao amin'ny fikarohana vao haingana, dia nisy mpahay siansa notarihan'i Imai nahita sy nanala ilay mpizara mimoria ny NMN tao anaty sela.
Ity fikarohana NMN ity dia azo jerena voalohany tamin'ny Janoary 2019 ao Ny metabolism'ny natiora. Imai dia nanamarika fa ny proteinina iray manokana, Slc12a8, dia tompon'andraikitra amin'ny fiovàna haingana ny NMN mankany NAD + ary mitondra azy any amin'ny efitra figadrana. Io biby io dia manjaka amin'ny olona tranainy fa tsy amin'ny olona tanora na salama.
Amin'ireo fanadihadiana natao mialoha, ny mpahay siansa mpikaroka dia hamongotra ireo fepetra fantatry ny vovo-dronono nicotinamide mononucleotide ao anaty rano alohan'ny hanomezana azy ireo ny totozy.
Ny tombontsoa avy amin'ny mononucleotide nicotinamide (NMN)
Ny NMN dia manana andraikitra ara-pahasalamana marobe sy fiantraikany eo amin'ny vatan'ny olombelona. Tao anatin'ny folo taona latsaky ny folo taona dia nanokana ny fotoanany ny mpahay siansa mba hianatra ny tombotsoan'ny Mononucleotide Nicotinamide anisan'izany ireo rafitra manazava ny fahanterana sy ny aretina mifandraika amin'ny taona.
Andao hodinihina lalina ny tombony azo avy amin'ny fitambarana ao amin'ny rafitry ny olombelona.
(1) Fanamafisana ny fahaveloman'ny finday
Hatramin'ny fanombohan'ny 21st taonjato maro, ny manam-pahaizana dia nanana antony ampy hanambarana ny fahanterana ho toy ny dingana tsy azo kasihina. Na izany aza, dia nanjary lafo io hevitra io noho ny fisehoana mahazatra fananganana anti-aging toy ny nokotinamide mononucleotide.
Ny NMN dia voajanahary-mitranga ao amin'ny sela olombelona ary tompon'andraikitra amin'ny biosynthesis an'ny NAD + sy ny famokarana angovo. Rehefa mihantitra ianao, dia mitambatra ireo singa roa ireo, izay mitarika ho amin'ny fitsabahan'ny sela. Tadidio fa mila fitaovana solosaina ampy ireo rafitra fiasa ireo mba hamerimberenana foana, ka noho izany, ny fianjerana dia hanapaka ny fiainan'ny sela.
Ny fampandehanana ny fanafody fihenam-bidy mahatsiravina toy ny NMN dia hamadika ny dingana ary hanemorana ny rafitra efa antitra.
(2) Mijoro eo amin'ny sehatry ny angovo ho an'ny tanora
Ny loharanon-kery lehibe indrindra amin'ny aretina mifandraika amin'ny fahanterana dia mihena mankany amin'ny ambaratonga. Ny fihenan'ny famokarana angovo ao anatin'ireo sela dia ny fiantraikany lehibe amin'ny soritr'aretina efa antitra.
Ny ho avin'ny NAD +, ny NMN dia manana anjara andraikitra amin'ny fitazonana ny ambaratonga tsara indrindra amin'ny mitochondria sela. Ny fahanterana dia hiteraka fihenam-bidy amin'ny fifantohana amin'ny NAD +. Vokatr'izany, ny fizotran'ny taonan'ny fahanterana dia mitarika ho amin'ny fampandrosoana aretina efa antitra.
Ny fidinan'ny angovo azo avy amin'ny sela ao amin'ny taova tena ilaina toy ny hozatra, ny fantson-dra, ny voa, ny atiny, na ny pancreas dia manelingelina ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Izany no mahatonga ny aretina toy ny ischemia, ny toe-piainana, ny tsy fahampian-tsakafo, ny aretin'ny neurodegenerative, ary ny hafa mitifitra.
Ny vahaolana tonga lafatra dia amin'ny famenon-tena Monotucleotide Nicotinamide ary NAD + miaraka amin'ny fitsaboana NMN ivelany. Ireto fanafody manohitra fahanterana manome manome aina vaovao ny sela mihantitra, izay avy eo hitafy tanora.
(3) Manatsara ny fandosiran'ny rà
Ny iray amin'ireo fanovana nitranga nandritra ny fahanterana dia ny fihenan'ny kalitao amin'ny toeram-pianakaviana. Noho izany, ny rafi-pandam-bary dia mikorontana be rehefa mitondra ny sakafo, oksizenina, hafanana, na ny fako avy amin'ny taova. Koa satria maharitra ny toe-draharaha, dia miharatsy ny fotoana mitarika ho amin'ny fisian'ny aretina efa hatry ny ela.
Ny nicotinamide Mononucleotide dia tompon'andraikitra amin'ny famokarana sambo. Avelao aho hanazava. Mampifandray ny NAD + ilay fitambarana, izay mivadika ho proteinina deacetylase (SIRT1).
Mifanohitra amin'izany kosa, ny SIRT1 dia nanala ny lysine fialan-tsasatra izay manampy amin'ny famokarana radika maloto amin'ny oksizenina. Io fihetsika io dia miady amin'ny fihanaky ny oksidia azo tsapain-tanana, ny valifaty, na ny lozam-pifamoivoizana. Amin'ny tranga tranainy, ny vatany dia hanafoana ny endriky ny asamia sy ny fepetra mifandraika amin'izany amin'ny alàlan'ny fikarakarana hafahafa (IPC). Ny IPC dia handray andraikitra amin'ny fametrahana ny famokarana SIRT1.
Azonao atao ny manatanteraka ny NMN alohan'ny fisehoan-javatra iray hafahafa na mandritra ny fisehoany. Alohan'ny fisehoan-javatra, ny fitambarana dia manome fiarovana amin'ny fiarovan-tena amin'ny fanamafisana ny famokarana ATP amin'ny glycolysis.
Amin'ny tranga Ischemia, dia mbola azonao atao ny mampiasa Nicotinamide Mononucleotide satria hiteraka acidosis ary hiteraka tsy fahazoana mitochondrial; noho izany, manome antoka ny fiarovana ny rafi-pitabatabana.
(4) Fiaretana hozatra
Inona no antenainao rehefa mihena ny rà? Eny, ny fanjakana dia hitarika ny fahaverezan'ny mason'ny hozatra. Tsy isalasalana fa ho hitanao fa ny olona taloha dia tsy dia mahomby firy, tsy miaritra firy, tsy mihetsika ary reraka be foana.
Ny iray amin'ireo zava-baovao hitan'ny Dr. Sinclair dia nifantoka tamin'ny fahombiazan'ny NMN tamin'ny fanamafisana ny tanjaky ny hozatra. Araka ny fanadihadiana nataony tamin'ny 2013 sy tato ho ato, ny totozy taloha izay niharan'ny fitsaboana NMN nandritra ny fito andro dia nanjary salama ara-batana sy navitrika toa ireo namany tanora kokoa.
Ny hery misintona sy ny fiaretan'ny toto tranainy indrindra (30-volana efa-taona) dia mitovy amin'ny an'ny zazalahy kely dimy volana. Ireo taona ireo dia mitovy amin'ny 70 sy 20 taona eo ho eo amin'ny olombelona. Azonao atao ny manafoana an'io asa io amin'ny olona Azo antoka fa fahafatesana.
(5) Miady amin'ny aretina vokatry ny neurodegenerative
Ny atidoha dia toy ny trano fametrahana ny rafitrao. Ity lafiny iray ity angamba no antony mahatonga ny mpitsabo hiantehitra foana amin'ny asan'ny atidoha rehefa manambara ny vanim-potoanan'ny fahafatesana.
Ny fihenan'ny haavon'ny NAD + ao amin'ny atidoha dia manelingelina ny fahasalaman'ny saina amin'ny zokiolona. Ny fitantanana ny NMN dia manatsara ny famokarana NAD +, noho izany, ny fiarovana ireo asany.
Ny fanadihadiana natao dia manaporofo fa ny tombotsoam-panafody nokoninina dia mahasoa fahalalana, tapaka lalan-dra, ary manakana ny fahaverezan'ny fahatsiarovana, izay mihantona amin'ny fahanterana. Summarily, ity anti-fahanterana supplement dia tompon'andraikitra amin'ny fikojakojana ny neurons.
Ny NMN dia mikendry indrindra ny etiology amin'ny toe-pahasalamana neurolojia. Ohatra, Alzheimer ny aretina dia mitranga noho ny fihenan'ny NAD +, ny tahan'ny ambany fanjifana oksizenina ao amin'ny ati-doha, ary ny tsy fetezan'ny mitochondrial. Ny fampitomboana ny habetsaky ny NMN ao amin'ny vatana dia manohitra ireo vokatra rehetra ireo.
Araka ny fanadihadiana navoaka tamin'ny 2012, ny Nicotinamide Mononucleotide dia hitantana amin'ny fomba mahomby ny fahasimban'ny intracerebral, izay matetika mitarika fivontosana. Ny totozy taloha izay teo ambanin'ny fatra NMN dia nanoratra fanatsarana lehibe tamin'ny famokarana NAD + intracerebral. Ireo maodely fikarohana ireo dia nanana fiarovana faran'izay betsaka amin'ny famelezana ischemika, ny fahafatesan'ny neural ary ny fivontosan'ny neurolojia.
(6) Fihetseham-po bebe kokoa tamin'ny vanim-potoana taloha
Mpikaroka marobe no nianatra sy nanaporofo fa ny NMN dia manalefaka ny fandeferana glucose amin'ny fanatsarana ny metabolisman'ny siramamy amin'ny tazom-bozaka marevaka miaraka amin'ny sakafo mahantra. Ity fianarana ity koa dia nampiharina tamin'ny olona efa antitra izay mampivoatra diabeta na vokatry ny siramamy ambony na ny sakafo mahavelona. Ankoatra izany, ny sakafo matavy amin'ny tavy dia mitarika amin'ny fanoherana ny insuline.
Ny nicotinamide mononucleotide dia mitazona ny famokarana tampon'ny NAD +, izay mampihena ny aretina mifandray amin'ny taovam-pananahana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fihenan'ny insuline amin'ny taovam-piterahana.
(7) Fitsaboana Diabeta
Ny olona voan'ny diabeta type II dia maneho hatrany ny fanoherana ny insuline. Ity toetra ity dia vokatry ny fahalavoana ao amin'ny NAD +. Vokatr'izany, ny sela dia miatrika tsindry oksidatif sy fivontosana. Raha mbola tanora ianao, ny vatana dia hamelombelona ny tenany amin'ny alàlan'ny hetsika ara-batana endogenous. Na izany aza, amin'ny fahanterana dia mihena ny haavon'ny NAD + amin'ny taova mahavelona toy ny hozatra, ny atiny, ny ati-doha ary ny sarakaty.
Antony iray hafa mahatonga ny diabeta mifandray taona dia ny sakafo matavy be. Ny tavy mahavoky be tsy ara-dalàna dia manakana ny biosynthesis an'ny NAD +. Tamin'ny ezaka natao hanaporofoana ny fahombiazan'ny Nicotinamide Mononucleotide amin'ny fitsaboana ny diabeta sy ny diabeta vokarin'ny sakafo dia nampiasa maodely totozy roa i Yoshino sy ireo mpiara-miasa aminy.
Taorian'ny nitantanana fatra isan'andro NMN nandritra ny 10 andro dia nametraka ny manam-pahaizana fa ny totozy, izay nihinana sakafo matavy be, dia nanoratra ny tsy fahazakana ny insolerance. Etsy ankilany, ny totozy diabeta dia nanatsara ny hyperlipidemia.
(8) Ny fiverenan'ny fahanterana
Ny aretina mitaiza dia mihaona hatrany amin'ny dingan'ny fahanterana. Rehefa lasa fiovana ara-batana maromaro ny vatana, dia mety hiverina ny sasany amin'ireo asa tanana. Raiso, ohatra, ny habetsahan'ny dinikleotide adenine nicotinamide mihena amin'ny taova maromaro, ka miteraka fihenan'ny famokarana angovo avy amin'ny mitochondrion sela.
Ny fanaovan-tsolika dia mampiavaka ireo singa isan-karazany toy ny fanimbana ny ADN noho ny molekiola tsy voavonjy, ny adin-tsakafo manimba, ary ny aretina hafa. Fantatrao ve izay mitranga? Eny, misy proteinina ADN (PARP1) ao amin'ny rafitra olombelona. Ho an'ny fahasimban'ny ADN, ny NAD + dia hamindra io proteinina io hanamboarana ny sela voakasika.
Fikarohana maro no nahitana ny tombotsoa mononucleotide nicotinamide amin'ny fahanterana. Ohatra, i Mills sy ireo mpiara-miasa aminy dia nampiasa maodely totozy hamotopotorana ny vokatry ny fihenan'ny fisiolojika NMN.
Tao amin'ilay fanadihadiana, ireo mpikaroka dia nahatsikaritra fa ny fitantanana maharitra ny fitsaboana dia nitarika ho amin'ny fikajiana ny fototarazo ao anaty atiny, ny hozakelin'ny skeleta, ary ny vatan'ny tsiranoka. Ankoatra izany, ny fikarohana dia nanamafy ny fanatsarana ny fitenin'ny sela, ny fitomboan'ny lymphocytes ary ny fampidirana ireo leokocytes.
Ny toetra miavaka amin'ny fahanterana dia ny fisian'ny loko marevaka eo amin'ny maso maso. Io fahasamihafana io miaraka amin'ny fihenan'ny taolana sy ny tsy fahafahana mamoaka ny ranomaso dia nodinihina tsara tamin'ny hala. Ny mpahay siansa dia nanamarika fa ireo teboka, izay napetraka tamin'ny fitsaboana NNN 12-volana, dia niverimberina ny fepetra rehetra voalaza etsy ambony.
Ny fahantrana no antony tokana mahatonga ny olona buy nicotinamide mononucleotide.
(9) Ny fitsaboana ny matavy
Ho an'ireo zokiolona, ​​ny NMN dia mety hampihena hatramin'ny 10% ny lanjany voalohany raha tsy mahita ny toerana eo anelanelan'ny alahelona sy ny fitomboany. Ny rafi-pitondran-drazana momba ny matavy sy ny diabeta dia mifamatotra. Ny nivoahan'ny NAD + ambany dia miteraka tsy fahampian-tsakafo; Noho izany, fihenan'ny famokarana ATP.
Ny fahasembanana dia mandanja ny mety ho an'ny mitochondria amin'ny famoronana angovo ATP ho an'ny sela. Raha vao manomboka ny Nicotinamide Mononucleotide ianao dia hampivoatra ny tsy fahazakana ny glucose sy ny zavatra hafa mifandraika amin'ny fiterahana ny fanafody.
Raha ny fanatsarana ny fikorianan'ny rà no jerena, ny NMN ho an'ny fitsaboana matavy dia mihetsika toy izany koa amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena. Ny pilina tokana dia tsara toy ny fampiasana treadmill isan'andro. Na izany aza, ny fahasamihafana dia tonga amin'ny haavon'ny atin'ny NAD + ao amin'ny taova. Raha ny Nicotinamide Mononucleotide dia mampitombo ny NAD + na amin'ny atiny na amin'ny hozatra hozatra, ny fanatanjahan-tena dia mampiorina ny fitambarana ao anatin'ny hozatra.
Manana Mononucleotide Nicotinamide (NMN) Tena Miasa Amin'olona ve Ianao?
Eny, mety ho io fanontaniana io no maneno ao an-tsainao. Na izany na tsy izany, ny fikarohana rehetra sy ny fikarohana Preclinical mifototra amin'ny monotucleamide Nicotinamide sy ny NAD + dia nikendry ireo maodely murine.
Raha manana famandrihana momba ny fahombiazan'ny asa NMN amin'ny olombelona ianao, eto ny zavatra tokony ho fantatrao. Ny Dr. David Sinclair, mpikaroka ambony indrindra sady mpahay siansa ao amin'ny Oniversiten'i Harvard dia iray amin'ireo mpandray ny NMN.
Niaiky i Sinclair fa mandray ny famenony. Hatreto, ilay manam-pahaizana dia tsy mbola nandrakitra voka-dratsin'ny monotucleamide nicotinamide. Mifanohitra amin'izany no ilazany fa mahatsiaro tanora amin'ny saina maranitra izy. Hangover sy jet jet dia efa lasa taloha ho azy. Nanamafy koa izy fa ny rainy, izay efa feno fitopolo taona, dia mandray ny fanampin-tsakafo ihany koa.
Fanampin'izany, Dr. Sinclair dia nampiasa ny fitsaboana toy ny fitsaràna tany am-piandohana tao amin'ny Hopitaly Brigham sy Women. Izy dia mikasa ny hanandramana bebe kokoa ny famenoana ireo olon-dehibe zokiolona. Na dia efa vita aza ny fianarany, dia tsy maintsy mamoaka boky ofisialy izy. Nanomboka ny dingana faharoa amin'ity klinika ity i Sinclair NMN supplement fikarohana in 2018.
Amin'ny fanadihadiana klinika izay vokatry ny 1st Ny June 2020, ireo mpikaroka dia mikasa ny hametraka ny fiovan'ny fahatsapana sy ny asan'ny beta-cell miaraka amin'ny fanampiana NMN amin'ny olombelona. Ireo manam-pahaizana dia avy amin'ny Sekoly Ambony momba ny fitsaboana any Washington sy ny Sekoly momba ny fitsaboana any Keio any Tokyo.
Tamin'ny fisedrana iray natao tao amin'ny 2016 tao amin'ny Oniversiten'i Keio, ireo manam-pahaizana dia mikasa ny hanombana ny fiarovana ny NMN amin'ny olon-dehibe salama. Ao anatin'ilay dingana faharoa mitohy, io institiota io, tarihin'i Shin-Ichiro, dia manadihady ny fitantanana maharitra ny NMN. Ankoatra izany, mikasa ny hanombantombana ny mari-pahaizana momba ny metabolic-syndrome, ny kinetika NMN, ary ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina amin'ny fikorontanan'ny glucose.
Tao amin'ny fanadihadiana momba ny klioba 2017 nataon'ny Oniversiten'i Washington, ny mpandray anjara dia ahitana vehivavy 50 taona 55 hatramin'ny taona 75. Ny vondrona dia napetraka amin'ny dosage isan'andro amin'ny 250mg an'ny NMN nandritra ny valo herinandro. Na dia olona salama aza izy ireo, dia somary avo lenta ny glucose, ny triglyceride, ary ny BMI ireo vehivavy ireo. Mbola tsy vita ny fianarana.
Toy ny amin'izao, tsy mbola misy famoahana manamafy ny asa NMN amin'ny olombelona. Na izany aza, tokony hijanona ianao satria misy zavatra mahandro ary mety hampanantena ny fitsapana ara-pahasalamana.
Ahoana ny fampiasana Mononucleotide nicotinamide (NMN) ho fanoherana ny fihanaky ny aretina?
Raha mikasa hividy ny mononucleotide nicotinamide ianao dia misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrao.
Azonao atao ihany ny mandray ny fitsaboana ho fanampim-panafody satria tsy mbola nahazo ny fanekena farany ny FDA ho dokotera.
Ny dosage dia eo anelanelan'ny 25mg sy 300mg, arakaraka ny tombony ara-pahasalamanao izay tianao hotratrarina. Na izany aza, misy olona miaiky fa mandray ny 1000mg isan'andro. Raiso, ohatra, Dr. Sinclair dia maka 750mg / andro. Ankoatr'izany, manampy amin'ny fitondrana resveratrol sy metformin io fitondrana io.
Amin'ny fisedrana ara-pitsaboana NMN, ny ankamaroan'ny mpikaroka dia mametraka ny olom-pehezany amin'ny dosie 100mg mankany 250mg.
Raha te-hampitombo ny fahafoizan'io fanampiana io ianao, dia tokony hividy takelaka Niconinamide Mononucleotide ho an'ny fitantanana sublingual. Ny fihinanana tsindrona fanafody dia mampihena ny habetsaky ny habetsahana. Ny antony dia ny fisian'ny metabolismana sy ny fahasimbana rehefa mandalo amin'ny trakta sy ny atiny izy.
Ny NMN dia miditra mivantana amin'ny rà ary tsy misy filtrations. Ny tahan'ny fampidinana io fomba fitsaboana io dia avo dimy heny noho ny fampidirana am-bava. Amin'ity tranga ity, tsy maintsy ampitomboinao ny dosage mba hahazoana ny metabolisma voalohany amin'ny aty. Raha manaiky fa nanao fikarohana ianao, dia mety mila iloman-koditra nokotinina ianao mba hamitana ilay fianarana.
Ny fiantraikan'ny Side Ny Mononucleotide Nicotinamide Tokony ho Fantatrao
Ny mahazatra dia mitovy amin'ny asehon'ny niacinamide sy ny vokatra B3 compoundnicotinamide mononucleotide hafa. Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona dia tsy miaina izany akory. Ohatra, ny mpahay siansa mpikaroka ambony ao amin'ny oniversite Harvard dia niaiky fa naka ny NMN, saingy tsy hitany akory ny vokany mandondona.
Hatreto, amin'ny asa rehetra misy ny moka nokotinamidana amin'ny totozy, dia tsy misy antontam-baovao milaza fa misy ny fiantraikany eo amin'ny modely amin'ny murine. Tsy nisy mpikaroka nandefa filazana ratsy teo amin'ny fitantanana NMN sy fotoana maharitra.
Ny olona sasany dia afaka mitandrina ireto fiantraikany ratsy manaraka ireto;
Maty ny vavony
Ny fihetseham-po tsy mandeha amin'ny laoniny toy ny fahasosorana, fisakafoanana, na fifandonana
Amin'ny tranga tsy fahita, ny voan'ny aretin'ny nicotinamide mononucleotide dia mety henjana toy ny hoe mila mikaroka fitsaboana avy hatrany. Mba hilazana ny fahasarotan'ny vitsika, ny tsy fahampiana fo, ny fivoahana maharitra, ny fihodirana ny hoditra, ary ny fahaverezan'ny fiankinan-doha dia anisan'ireo soritr'aretina.
Hatreto, ny fisedrana ara-pitsaboana dia mifototra amin'ny olon-dehibe salama amin'ny taona faha-45 hatramin'ny taona 75. Noho izany antony izany, ny vondrona manaraka dia tokony hitandrina mialoha ny fampiharana ny fanafody fananganana NMN.
Vehivavy bevohoka sy mitaiza
Olona manana tantaram-pahibemaso ho an'ny NMN
Ireo marary mandray fanafody amin'ny aretina mitaiza
Aiza no Hahitako Fidiran-doza Anti-Aging-Nokotinamide Mononucleotide (NMN)?
(1) Ny loharanon-tsakafo NMN
Azonao atao tsara ny manontany tena hoe nahoana no tokony hividy nokotinamide mononucleotide ianao raha afaka mahita izany amin'ny sakafo sasany. Avelao aho hanazava vetivety hoe nahoana io fanampiny io no ilaina.
Satria ny NAD + dia mianjera ao amin'ny vatana noho ny fahanterana, tsy afaka manohitra ny vokany ireo sela. Amin'io fotoana io, ny safidy tokana dia mety hampiasa ny fanafody NMN. Ireo mpitsabo dia hamporisika anao haka sakafo NMN-be toy ny broccoli, holatra, edamame, na shrimp. Na izany aza, ireo sakafo ireo dia omena kely noho ny 5% ny zavatra ilain'ny vatanao.
Ny FDA dia manoro hevitra fa mila olona manodidina ny 560mg an'ny NMN isan'andro ny olombelona. Raha manaiky ianao fa mahazo ny ampahany amin'ny broccoli, dia tsy maintsy mandany mihoatra ny 1500 pounds mitovy.
(2) NMN Supplements
The Nokotinamide mononucleotide bulk powder dia azo amidy amin'ny fivarotam-panafody sy ny toeram-pivarotana maro. Raha te hahazo ny sasany amin'ny fikarohana ianao, dia afaka manamboatra lamandy lehibe, izay tonga amin'ny vidiny mirary sy miala amin'ny fiampangana amin'ny fandefasana.
Ny famoahana an-tserasera amin'ny NMN dia tsy vitan'ny hoe mamonjy amin'ny fotoanao fotsiny fa manome sehatra tsara ho fampitahana ny vidiny samihafa. Raha tsy mpikaroka ianao, dia mbola afaka mividy ny Nikotinamide Mononucleotide fanampin-tsakafo ho an'ny tena manokana. Alohan'ny hamoahana baiko, dia azo antoka fa sakafo vokarin'ny sakafo izany.
Tsy mahagaga raha manizingizina fa ny NMN dia mitazona ny androm-piainan'ny olombelona. Na izany aza, mitazona izany fanambarana izany. Ny antony mahafaty ny zokiolona dia vokatry ny aretina vokatry ny taonan'ny fahanterana, izay vokatry ny asa tsy mahazatra.
The Ny antitranina nokotinamide manohitra ny fahantrana dia mijanona fotsiny mba hanatsarana ny fandefasana solika ary hampiroboroboana ny endriky ny sela. Miasa amin'ny alàlan'ny fanitsakitsahana ny NAD + izy, izay mihena ny fihenan'ny taona.
Tsy afaka manova ny tarehinao fotsiny ny fampiasana menaka fanadiovan-tsakafo manohitra ny taovam-pananahana, ny fitsaboana, ny filalaovana masoandro, na ny fampiharana ara-dalàna amin'ny sakafo mahazatra. Na izany aza, mila mahatakatra ny antony fototry ny fahasarotana efa hatry ny ela ianao mba hiatrehana azy ireo tsirairay. Ny nokotinamide mononucleotide dia mamerina ny fizotran'ny taolana amin'ny alàlan'ny fanamboarana ADN voaaro, ny fiarovana ny atidoha, ny rafi-koditra, ny fanatsarana ny asany, ary ny fanamafisana ny fiaretana.
Raha te hividy vovoka be dia be ny nicotinamide mononucleotide, mitadiava miaraka aminay ary mankafy ny vidin'ny namana.
Mills, KF, Yoshino, J., Yoshida, S., et al. (2016). Ny fitantanana maharitra ny fiterahana nokotinamide dia manala ny fihenan'ny fombam-pahaizana ara-batana amin'ny mice. Cell Metabolism.
Yoshino, J., Mills, KF, Imai, SI, ary Yoon, MJ (2011). Ny Nikotinamide Mononucleotide, ny fanalahidy NAD + Intermediate, dia mitsabo ny Pathophysiology ny Diabeta Diabeta sy Diabeta ao amin'ny Mice. Cell Metabolism.
Yamamoto, T., Byun, J., Zhai P., Ikeda, Y., Oka, S., ary Sadoshima, J. (2014). Ny Nikotinamide Mononucleotide, ny ivon'ny synthesis NAD +, dia miaro ny fo amin'ny Ischemia sy ny Reperfusion.
Sinclair, DA, Uddin, GM, Youngson, NA, ary Morris, MJ (2016). Loha laharana amin'ny fampitomboana ny fitsaboana amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny NAD + mpialoha lalana Nicotinamide Mononucleotide (NMN) sy enina herinandro fanatanjahan-tena ao amin'ny Obese vehivavy vavy.
Imai, S., Yoshino, J., Mills, KF, Grozio, A., et al. (2019) Slc12a8 dia mpitrandraka Mononucleotide Nicotinamide. Ny metabolism'ny natiora.
De Picciotto, NE, Mills, KF, Imai, S., Gano, LB, et al. (2016). Ny nokotinamide mononucleotide dia mamerina ny tsy fahasalamana sy ny areti-mifindra amin'ny tsindrin-tsiranoka amin'ny alikaola.
Yao, Z., Gao, Z., Yang, W., ary Jia, P. (2017). Nikonin-kidnea mononucleotide manakana ny fanafody JNK hamindra aretina Alzheimer.
Hou, Y., Wang, Y., Zhang, Y., Lautrup, S., et al. (2018). Ny NAD + Supplementation dia manara-maso ny endri-pahendrena Alzheimer sy ny valin'ny fanondrahana ADN ao anaty modely vaovao an'ny AD izay ahitana ny tsy fahampian'ny ADN.
Raw NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) VAOVAO (1094-61-7).
2. Mononucleotide Nicotinamide hafahafa (NMN)
3.Nonotinamide Mononucleotide sy NAD +
4. Ny fikarohana farany an'ny Nicotinamide Mononucleotide miasa amin'ny totozy
5.Soa azo avy amin'ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
6.Ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ve dia tena miasa amin'ny olombelona?
7. Ahoana ny fampiasana Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ho fanoherana ny fahanterana?
8. Ny vokatry ny Nicotinamide Mononucleotide tokony ho fantatrao
9.Aiza no ahitako ny zava-mahadomelina manohitra ny fahanterana-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?